Golaha Ammaanka Oo War Ka Soo Saaray Tukaraq | Hangool News
Golaha Ammaanka Oo War Ka Soo Saaray Tukaraq
June 8, 2018 - Written by Hangool News 1
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa fadhi uu shalay yeeshay lagaga hadlay colaadda ka aloosan degmada Tukaraq ee gobolka Sool, halkaas oo Somaliland iyo maamulka Puntland ee Soomaaliya isku hor fadhiyaan kadib dhawr dagaal oo ka dhex dhacay sanadkan.
Golaha ammaanka oo laga akhriyay bayaan uu soo saaray hoggaanka goluhu waxay dhammaan dalalka xubnaha ka ah isku raaceen in degdeg loo joojiyo colaadda Tukaraq, islamarkaana ciidamada la kala qaado.
“Golaha ammaanku wuxuu ka walaacsan yahay dagaallada ka soo cusboonaaday gobolka Sool. Golaha Ammaanku wuxuu dhinacyada ku boorrinaya in si aan dib u dhac lahayn loo fuliyo arrinta ka go’an bahwadaagta caalamka ee ah in si dhakhso ah colaadda la joojiyo. Taas oo ay ku jiraan hadallada ama ficillada sii kicin kara xiisadda, waxa kale oo dhinacyada lagu boorrinaya in ay ciidamada kala qaadan oo wada hadal bilaaban,” Sidaas ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay Golaha Ammaanka.
Golaha ammaanku wuxuu sheegay in uu ixtiraamayo midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, islamarkaana ka digayo culaysyo kasta oo gudaha iyo dibadda ah oo curyaaminaya dadaallada nabadda iyo dib u dhiska Soomaaliya, waxaanu bahwadaagta Soomaaliya la shaqaysa ugu baaqay in laga hor taggo arrimaha kala qaybinaya Somalia ee curyaaminaya dadaallada beesha caalamka. Hadalkan ayaa u muuqda mid ku socda dalalka Khaliijka oo faro gelin ku leh Soomaaliya, islamarkaana maamul goboleedada iyo xukumadda dhexe la kala safan yihiin.
Geesta kale waxa shalay madaxweynaha Soomaaliya la kulantay kaaliyaha siyaasadda ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Rosemary Dicalro waxaanay sheegtay socdaalkeeda oo ah kii u horeeyay in uu marag u yahay sida ay Somalia muhiim ugu tahay Qaramada Midoobay. Waxay sheegtay in ay Farmaajo ka wada hadleen arrimaha ammaanka, tadawuraadka siyaasadda, dib u habaynta dastuurka iyo arrimo kale waxaanay la kulantay saraakiisha Midawga Afrika.
Source:- Voicing Concern over Fighting in Somalia, Security Council Presidential Statement Urges Parties Cease Hostilities, Allow Unhindered Humanitarian Access